पर्यटकले खोलिदिएको आँखाः हिमालय आँखा अस्पताल - Samadhan News
पर्यटकले खोलिदिएको आँखाः हिमालय आँखा अस्पताल
समाधान संवाददाता २०७६ भदौ १२ गते १२:३८
नेदरल्यान्डबाट नेपाल घुम्न आएको अनिता सिमोन्स र लिन्ड्रेट पार्लेभ्लिटको जोडी जुम्ला पुग्यो । जुम्लाको गाउँमा पुग्दा त्यहाँका नागरिकमा आँखाको समस्या देखेपछि जोडी अवाक भयो । अब केही गर्नुपर्छ भनेर स्वदेश फर्केको जोडीले च्यारिटीबाट सुरुको वर्ष १० लाख डलर संकलन गर्‍यो । अनि सुरु भयो आई केयर फाउन्डेसन नेदरल्यान्ड । त्यही फाउन्डेसनले नेपाल नेत्रज्योति संघसँग मिलेर पोखरामा हिमालय आँखा अस्पताल खोल्यो । त्यही अस्पताल अहिले गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको ज्योति बनेको छ ।
नेपाल लगायत विश्वका १६ मुलुकमा आँखाको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको आई केयर फाउन्डेसन नेदरल्यान्डले ३५ वर्ष पार गरेको छ । यही अवसरमा फाउन्डेसनले नेपालका विभिन्न जिल्लामा उत्सव मनाएको छ । यही क्रममा पोखरा आएका फाउन्डेसनका संस्थापक लिन्ड्रेट पार्लेभ्लिटले हिमालय आँखा अस्पतालले गरेको प्रगति देखेर खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘३५ वर्ष वर्ष पहिला जे सपना देखेर हामीले नेपालमा काम थालेका थियोैं त्यही अनुसार काम भएको पायौं, यसले हामीलाई धेरै खुसी बनाएको छ ।
सन् १९८४ मा स्थापित फाउन्डेसनले पोखराको हिमालयमात्र होइन पूर्वको झापामा मेची आँखा अस्पताल खोल्न पनि सहयोग गरेको थियो । पहिला उपचार केन्द्रको रुपमा स्थापित हिमालय आँखा अस्पताल हाल शैक्षिक थलोसमेत बनेको छ । उक्त अस्पतलामा हाल ब्याचलर इन अप्टोमेट्री र मास्टर्स इन अप्टोमेट्रीका कक्षासमेत सञ्चालनमा ल्याएको चिफ मेडिकल डाइरेक्टर डा. इन्द्रमान महर्जनले बताए । उनका अनुसार पोखरा विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलोपटक पोखरामा मास्टर्स इन अप्टोमेट्री कक्षा सञ्चालनमा आएका हो ।
आई केयर फाउन्डेसनका निर्देशक बिजोर्न स्टेन्भर्सले नेपाल र नेदरल्यान्डबीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि समेत फाउन्डेसनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछन् । फाउन्डेसनको नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर अनिल गोर्खाली ग्रामीण भेगमा रहेका आँखा उपचार केन्द्रको स्तरवृद्धि र जनशक्तिको क्षमता बढाउन सहयोग अझै जारी रहेको बताए ।
अस्पतालले सुरुका ५ वर्ष कमाएको सबै रकम फाउन्डेसनले अस्पतालको कोषमा राखिदिएको छ । त्यसपछिका १० वर्ष १० प्रतिशत कटाएर कोषमा राखिदिएको डा. महर्जनले बताए । त्यसपछि भने फाउन्डेसनले नेपाल नेत्रज्योति संघलाई उक्त अस्पताल पूरै हस्तान्तरण गरेको हो । नेत्रज्योति संघ कास्कीको व्यवस्थापनमा अस्पताल सञ्चालनमा छ । चिफ मेडिकल डाइरेक्टर डा. महर्जन भन्छन्, ‘अरु रोग लागे अन्यत्र जानुपरे पनि आँखाको उपचारमा पोखराले अन्यत्रकालाई निम्तो दिइरहेको छ । चस्मा लगाउन नपर्ने गरी गरिने रेटिना सम्बन्धी अप्रेसन सुविधा तिलगंगा आँखा अस्पतालमा मात्रै छ । नत्र आँखा सम्बन्धी समस्याको ९० प्रतिशत उपचार पोखरामै हुने उनले जानकारी दिए । अस्पतालको आफ्नै प्रयास र दातृ संस्थाहरुको सहयोगले आँखा उपचारमा हिमालय आँखा अस्पताल अब्बल रहेको दाबी डा. महर्जनको छ ।
उनका अनुसार बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायत देशबाट बर्सेनि २५ जनाको हाराहारीमा इन्र्टनसिप गर्न आउने गरेका छन् । उनीहरुले नेपालीमा देखिएको आँखाको समस्या र यहाँ अपनाइएको उपचार विधिबारे सिकेर फर्कने गरेको थापा मगरको भनाइ थियो । हिमालय आँखा अस्पतालका लागि किनिएको ७० रोपनी जग्गामा हाल २६ वटा भवन छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत उक्त अस्पताललाई आर्थिक सहयोग गरेको छ ।